Scrapbooking लागि कागज बारेमा सबै
तपाईं कागजी कार्रवाई, अर्थात्, scrapbooking परिचित छैनन् भने, यो बाहिर आंकडा समय। र सबै अन्यसँग हामी scrapbooking लागि कागज बारेमा आज कुरा गर्नेछौं। र तपाईं निश्चित हाम्रो प्रस्ताव चकित हुनेछ।
पहिलो, कसरी सुरु गर्न scrapbooking - यो, को पाठ्यक्रम, कागज। कुनै पनि कार्ड मा जग कागज थुप्रै सुन्दर पानाहरू सँगै संयुक्त गर्न त एक, दुई, तीन, र ...। जहाँ स्क्र्यापबुकिङ लागि कागज किन्न? जवाफ धेरै सरल छ। आज, पर्याप्त पसलहरूमा यी सरल वस्तु बेच्न। पाठ्यक्रम, विदेश छन् विशिष्ट ब्रान्डहरु, कम्पनी, सबै भन्दा प्रसिद्ध, उत्पादन कागज स्क्र्यापबुकिङ। साथै, तपाईँले आपूर्ति संयुक्त राज्य अमेरिका वा जर्मनी सिधै आदेश गर्न सक्नुहुन्छ। यो लागि साइटहरु धेरै छन्, तर वितरण एक सभ्य राशि परिणाम थियो। र साँच्चै scrapbooking (दायाँ तस्विरमा) को लागि कागज राजा छुडौतीको लायक छ। तर, र यो उत्कृष्ट देखिन्छ: असामान्य डिजाइन, सम्पूर्ण संग्रह, उच्च घनत्व, राम्रो गुणस्तर। यो कागज बाट निश्चित masterpieces बाहिर बारी।
"हा! हो, हामी आफैलाई यो कागज आफ्नो मुद्रकमा मुद्रण हुनेछ! "- सायद तपाईंलाई लाग्छ। त यो धेरै नै भ्रामक छ। मुद्रक फोटो, केही ग्राफिक तत्व साँच्चै छाप्न सक्नुहुन्छ, तर कागज यो काम गर्ने छैनन्। के तपाईं एक उच्च गुणवत्ता मुद्रक, हुन सक्छ कुनै कुरा तपाईंले प्रयोग मुद्रण कागज, परिणाम विनाशकारी हुनेछ के हुनेछ:
- पानी हुन्छ भने सबै रंग बग्नेछन्।
- यो कागजमा आफ्नो उपस्थिति गुमाउनु हुनेछ समय, अभिलेखीय गुणस्तर छ।
- यो को स्पर्श मा "वास्तविक" बाट एकदम फरक छ र पूर्ण फरक देखिन्छ।
तर चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईंले एक फरक तरिका मा बचत गर्न सक्नुहुन्छ।
आविष्कार को आमा
scrapbooking र लागि कागज improvised गर्न सकिन्छ।
- 1) पहिलो, तपाईंले एक साधारण चित्रकला कागज, जसरी आवश्यक हुनेछ केदारनाथ कागज, र एक्रिलिक पेंट्स वा अन्य कुनै पनि एक सेट। एक रचनात्मक पृष्ठभूमि सिर्जना गर्न कागज को खाली पानामा आफैलाई प्रयास गर्नुहोस्। स्प्रे रंग, आफ्नो औंलाहरु छोड्न स्पन्जले टिकटहरु, सामान्य मा, कल्पना देखाउँछन्। तपाईं मास्क, पूर्वानिर्धारितएकाईहरू, बनावट पेस्ट प्रयोग गर्दै र पनि dudling (रेखाचित्र flourishes कलम) जब राम्रो प्रभाव छ। यो कागज मा धेरै लाभ हुनेछ - यो अद्वितीय रचनात्मक र अद्वितीय छ। सबै शैलीहरू र काम उपयुक्त हुनत। उदाहरणका लागि, हरेक दुल्हन दम्पतीले यस्तो अनुकूलन एल्बममा सहमत हुनेछन्।
2) scrapbooking लागि उबाल कागज। Contraption नाम artless विचार लुकाउँछ। तपाईं scrapbooking लागि, र एक स्वादिष्ट गन्ध संग एक असामान्य कागज आवश्यक छ भने, तपाईं बस कागज को साधारण पानाहरू कफी, बलियो चिया मा, भिजेको सक्नुहुन्छ स्वाद वेनिला र दालचिनी थप्नुहोस्। यस्तो कार्ड जाडो पानाहरू, पैड, आदि हस्तनिर्मित सजाउनु।
scrapbooking लागि कागज बारेमा केहि थप शब्दहरू
वास्तवमा, तपाईं बिल्कुल केहि बाहिर एक कृति सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं गत्ता एक साधारण टुक्रा कुनै पनि प्याकेजिङ्ग उब्रिएको, लाग्न सक्छ सेतो संग कवर , एक्रिलिक प्राइमर लेबल लुकाउन। अब जामुन, धनिया बीउ, वेनिला सेम, अभिवादन लेखिएको एक sprig संग, वस्त्र, रिबन को एक जोडी केही सुन्दर लेबल थप्नुहोस्। यो सबै फैल कुनै पनि कृत्रिम हिउँ, र धेरै सुन्दर संरचना प्राप्त। सानो बटनबाट टिभी बाट प्याकेजिङ्ग गर्न - सामान्य मा, scrapbooking सबै गति छ। रचनात्मक कल्पना र पैसा बचत गर्नुहोस्।
कति चाँडो आफ्नै हातले एक पोशाक सी
Skein आफ्नै हात motanki। Skein motanki: मास्टर क्लास
विभिन्न तरिकामा प्लास्टिक बोतल को एक pinwheel कसरी बनाउने?
हात द्वारा ढाँचा पर्दे। भान्सा पर्दे को सिलाई छोटो
के बच्चा खाना पकाउनु खाने को लागि हो: दुई स्वादिष्ट र प्रकाश व्यञ्जन
कीव मेट्रो स्टेशन - दुनिया मा गहिरो केही
मृगौला पत्थर देखि उत्पादन रूपमा
एलेक्स Smurfit: जीवनी पत्नी भिक्टोरिया boni र सफल व्यवसायी
परिवारको आनन्द लागि महिला जादू, वा बोट
Nokia Lumia 820 - मोडेल, ग्राहक समीक्षा र विशेषज्ञ को समीक्षा
फ्लैश कार्ड ढाँचामा छैन। के गर्ने?
Felice होटल 3: * होटल को विवरण र समीक्षाहरू
त्यहाँ हरियो चिया मा कैफीन छ र यो कसरी स्वास्थ्य असर गर्न सक्छ
केकडा लाठी संग रोल - छिटो, सजिलो, स्वादिष्ट
को गोल्यतलाई कीरा के हो